अन्तर्बारतामै एलिजालाइ किस गर्दा लुगा खुस्केपछि लजाए धमला (भिडियो) – Dailny NpNews
अन्तर्बारतामै एलिजालाइ किस गर्दा लुगा खुस्केपछि लजाए धमला (भिडियो)
प्रकाशित मिति: बुधबार, फाल्गुण २६, २०७७ समय: ८:२५:१०
अन्तर्बारतामै एलिजालाइ किस गर्दा लुगा खुस्केपछि लजाए धमला (भिडियो)पत्रकार ऋषि धमलाले हिरोइनहरुको व्यक्तिगत कुरालाई लिएर अन्तर्वार्तामा सधैँजसो चासो दिने गर्छन् । उनै धमलाको श्रीमति पनि कलाकार हुन् । एलिजा गौतमसँग वैवाहिक जिवनमा बाँधिएका धमलाले आफ्नो श्रीमतिले एक फिल्मलाई दिएको बे डसि न देखेर रि सा एका छन् । धमलाले एक अन्तर्वार्तामा पत्रकारसँग रि साउँ दै कलाकारले बे डसि न दिनु सामान्य भएको बताएका छन् ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
के भन्छन् धमला ?: प्रायः नेताहरुका अघिपछि दौ डिरहने पत्रकार ऋषि धमलालाई फिल्मप्रति खासै ल गाव थिएन । तर, श्रीमतीले नै रहर गरेपछि के लाग्यो ? श्रीमती एलिजा गौतमको रहर पुरा गर्न ऋषिले ‘अनुराग’ फिल्म निर्माण गर्दैछन् । डेढ करोडमा बन्न लागेको फिल्ममा ऋषिका साथै उनकी क्यानाडामा बस्ने सासुको पनि लगानी रहेको छ । ‘कान्छादाई गाना बजाइदेउन‘’ बोलको डान्सिङ गीतमा एलिजा ह ट अवतारमा देखिन्छिन् । यस्तो लाग्दैन कि उनी दुई बच्चाकी आमा हुन् । उनलाई कार्टुन्ज क्रुका सरोज अधिकारीले साथ दिएका छन् । गीतले अहिलेसम्म लाखौँ भ्यूज पाएको छ । गीतको मेलोडी रुचाइएको छ भने सरोजको डान्सको धेरैले प्रशंसा गरेका छन् । एलिजालाई भने मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । केहीले उनको मिहिनेतको सह्राहना गरेका छन् भने धेरैले उनी हिरोइन बन्न योग्य नभएको टि प्पणी गरेका छन् । भिडियो तल छ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
अरुले जे भने पनि ऋषि स्वयम् भने श्रीमतीको डान्स देखेर दं ग छन् । ‘एलिजाजीले जसरी डान्स देखाउनुभएको छ नी ?’ धमलाले भने, ‘आइ लाइक इट ।’ अरु हिरोइनहरुले छोटा लुगा लगाएको विषयमा ऋषिले आफ्नो कार्यक्रम धमलाको ह म लामा या ख्या ख्ति पार्ने गरेका छन् । आफ्नै श्रीमतीको छोटा लुगामा के भन्दा हुन् ? ‘पहिरन अलिकति छोटो त भएको नै हो, र हामीबीच यस विषयमा कुराकानी पनि भएको थियो । तर, उहाँले कथाले नै मागे अनुसार यस्तो लुगा लगाउनु परेको भन्नुभएको छ । त्यसैले मेरो क म्प्ले न छैन,’ ऋषिले जवाफ दिए ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
कथाले माग्यो भने भोली बे ड सि न गर्न पनि स्वीकृति दिनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले क्लियर जवाफ दिएनन् । ऋषिलाई अर्को प्रश्न सोधियो, ‘आफ्नी श्रीमतीलाई अर्कैले अंगा लोमा बे रेर नचाएको देख्दा तपाईंलाई औ डा हा भएन ?’ उनले हाँस्दै जवाफ दिए, ‘यो सिनेमा जगत्को कुरा हो, वास्तविक जीवनमा त उहाँलाई मबाट कसैले खो सेर लानै सक्दैन नी ।’ ऋषिका अनुसार यो फिल्म सुटिङ सुरु हुँदा एलिजाले दोस्रो बच्चा पाएको तीन महिना मात्र भएको थियो । भिडियो तल छ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
‘बच्चा नपाउँदै फिल्म खेलाएको भए हुन्थ्यो नी, किन यति ढिला ?’ उनलाई सोधियो । जवाफ दिए, ‘फिल्म खेल्ने भनेर हामीबीच पहिलेदेखि नै सल्लाह भएको हो । तर के–कसो गर्दागर्दै दुईवटा बच्चा जन्मिहाले ।’ अन्त्यमा उनले आफ्नी श्रीमतीको फिगरको खुलेर प्रशंसा गरे । ‘भर्खर सु त्के री भएका महिलाहरुको शरीर कस्तो हुन्छ ? तर, उहाँले आफ्नो शरीरलाई बडो जतन गरेर राख्नुभएको छ । उहाँको फि गर भर्खरका नायिकाको भन्दा कम छैन ।’ उनले नेपाली चलचित्रमा आफ्नी पत्नीको भविष्य निकै उज्ववल देखेका छन् । भन्छन्, ‘उहाँमा जुन किसिमको आत्मविश्वास छ नी, त्यो चा नचु ने महिलामा हुँदैन ।’ रि साइ न् एलिजाः नेपालको पहिलो कमेडी रियालिटी शो ‘कमेडी च्याम्पियन’को एक शृंखलामा चर्चित पत्रकार ऋषि धमलाको दम्पति अतिथिको रुपमा पुगे । शुटिङ्ग सम्पन्न भएको नयाँ शृंखलामा प्रतिस्पर्धीहरुले धमलाको क्यारिकेचर गरेका थिए ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
उक्त कार्यक्रममा धमला दम्पति झण्डै दुई घण्टा बढि बसेर प्रतिस्पर्धीहरुको प्रस्तुति हेरेर धमला दम्पतीले मनोरंजन लिएका छन् । कार्यक्रमको शुटिङ्ग पश्चात संचारकर्मीसंग कुराकानी गर्दै ऋषि धमलाले खुशी व्यक्त गरेका छन् भने श्रीमती एलिजा गौतमले आफ्नो श्रीमान् माथि म जा क उ डाए कोमा नि राश व्यक्त गरेकी छिन । मिडियामा सामु आफ्नो कुरा राख्दै एलिजाले भनिन्, “मेरो श्रीमान्लाई म जाक बनाएर बोल्नु भन्दा पहिला वहाँले गरेको योगदान सोच्न जरुरी छ । ऋषि धमला त्यत्ति सजिलै यो ठाउँमा पुग्नु भएको होईन त्यसैले वहाँको काम गर्ने शैलीमाथि म जाक बनाउनु अघि सबैले सोचे राम्रो हुन्थ्यो किनकी वहाँ हरेक कुरालाई सहज लिईदिनु हुन्छ र यहि फाईदा सबैले उठाउने गरेका छन् ।“****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
यहि विषयमा धमलाले भने हास्दै भने, “मैले सुरुदेखि नै भन्ने गरेको छु कि पत्रकारितामा कसैको आ लो चना गर्न सिकेन भने कोहि सफल हुन सक्दैन त्यसैले मेरो आ लोच ना गरेकोमा मलाई फरक पर्दैन बरु मैले दुई घण्टा बसेर मनोरंजन लिए । प्रतिस्पर्धीहरुको खुबी देख्दा मलाई खुशी लागेको छ र मलाई आ लोच ना गर्दा पनि वहाँहरुको खुबी देख्न सकिन्थ्यो ।“ एलिजा गौतमले आफुलाई श्रीमानले पर्याप्त समय दिन नसकेकोमा दु ख व्यक्त गर्दै आइरहेकी छिन । यहि विषयमा धमलाले एलिजालाई सम्झाउदै भने, “हाम्रो माया भनेको संगै हुने, टाँ सिएर बस्ने मात्र होईन । एलिजालाई केहि पर्दा मैले पर्याप्त समय दिएको हुन्छु र उनलाई माया गरिरहेको छु । माया गर्न संगै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन ।“ कमेडी च्याम्पियनको उक्त शो यकान्तिपुर टिभिमा प्रसारण भइसकेको छ । विशाल भण्डारीको निर्देशनमा बनेको उक्त रियालिटी शोले दर्शक माझ राम्रो चर्चा ब टुलेको छ ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
व्यस्त एलिजाः अभिनेत्री, मोडल हुन् एलिजा गौतम । फिल्म ‘अनुराग’बाट अभिनयमा डेब्यु गरेकी गौतम अभिनेत्री र मोडल भन्दा पनि बढी पत्रकार ऋषि धमलाकी पत्नी भनेर चिनिने गर्छिन् । पछिल्लो समय भने गौतम म्युजिक भिडियोमा ब्यस्त हुन थालेकी छन् । ल कडा उन केही खु कुलो भएको समयमा मात्र उनले ४ वटा म्युजिक भिडियो गरेकी छन् । जसमा अहिलेका चर्चित मोडल दुर्गेश थापा, पल शाह, पुष्प खड्कासँग उनले जो डी बाँ धेकी छन् । फिल्म ‘अनुराग’ अभिनयमा खासै चर्चा पाउन नसकेकी उनले म्युजिक भिडियो अभिनयमा भने राम्रो चर्चा पाइरहेकी छन् । त्यसैले पनि होला म्युजिक भिडियोमा उनको माग बढ्दो छ । उनी अभिनित पहिलो म्युजिक भिडियो ‘आधी कपाल’ यूट्युबमा हिट भएसँगै उनको भिडियोमा माग बढेको हो ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
एलिजा अभिनित पछिल्लो म्युजिक भिडियो ‘म सास बन्न पाए’ केही दिन अगाडि सार्वजनिक भएको थियो । आकाश श्रेष्ठसँग उनले भिडियोमा जोडी बाँ धेकी थिइन् । फिल्मभन्दा आफुलाई म्यूजिक भिडियो फापेको एलिजा स्वयम् बताउँछिन् । आगामी दिनमा फिल्म तथा म्युजिक भिडियो दुबैमा अभिनय गर्ने सोच रहेकी एलिजा अभिनित पछिल्लो म्युजिक भिडियो ‘आ टो पिठो’ सार्वजनिक भइसकेको छ । जसमा उनले अभिनेता पल शाहसँग रो मा न्स गरेकी छन् । एलिजाले १० घर बनाउनेः नायिका तथा मोडल एलिजा गौतमले एलिजा फाउन्डेशनको तर्फबाट देशका विभिन्न जिल्लाका वि कट गाउँमा घर बनाउने बताएकी छिन् । एलिजाले भनिन्, ‘चैत्र ११ गते परेको मेरो जन्मदिनबाट मैले यो कार्यको सुरुवात गर्न लागेकी हुँ । अहिले धादिङको विकट गाउँमा १० घर बनाउने तयारी छ । भूकम्परहित ३ कोठाको घर बनाएर मैले यो अभियानलाई सुरु गर्न लागेकी हुँ ।’****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
एलिजाका अनुसार, देशका विभिन्न जिल्लामा रहेका अती वि कट गाउँमा पुगेर घर बनाउने अभियान चैत्र ११ गतेबाट सुरु हुनेछ । नेपाली चलचित्र ‘अनुराग’मा काम गरेर कला क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी एलिजा अहिले म्यूजिक भिडियोमा व्यस्त छिन् । एलिजाले यो अभियानमा आफूलाई विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरुले पनि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको बताइन् । एलिजा भन्छिन्, ‘मैले विभिन्न समयमा विभिन्न कुराबाट प्रभावित मानिसहरुलाई सहयोग त गर्दै आएकी थिएँ । तर, अब घर नै बनाउने सोच आएको हो । यसमा सबैको साथ रहन्छ भन्ने आशा छ ।’****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****